Jabuuti oo la sheegay in ay noqotay Hoyga Basaasyada Caalamka Uga Dusa Afrika – SOMALI RADIO ONAIR
Jabuuti oo la sheegay in ay noqotay Hoyga Basaasyada Caalamka Uga Dusa Afrika
March 12, 2022 nuxur wararka Uncategorized 0
Wargayska Telegraph ee kasoo baxa waddanka Britain ayaa dhawaan daabacay maqaal dheer oo uu uga hadlayo tartanka ay quwadaha adduunka ugu jiraan inay kordhiyaan saameynta ay ku leeyihiin dalka Jabuuti.
Warbixinta wargeyska ayaa Jabuuti loogu tilmaamay “buulka basaasiinta” ee caalamka ay ku leeyihiin.
Waddamada Reer Galbeedka ayaa tartan kula jira Shiinaha si ay uga saameyn bataan dhinaca Jabuuti.
Waddankan yar ee Jabuuti waxa uu ku bannana yahay marinta Bab al-Mandab, oo ah halka loo maro Suez Canal, oo ka mid ah marinnada maraakiibta ganacsiga ee ugu mashquulka badan caalamka.
Waxa uu waddanka dhulkiisa ku fadhiyaa qiyaastii 23,000 oo kiiloo mitir, tirada shacabkiisana waxaa lagu sheegaa 942,000, sida uu wargeysku xusay.
Dekedda uu leeyahay dalka ayaa u ah isha dhaqaale ee ugu weyn.
Sida ay Jabuuti u leedahay marinnada isku xira qaybo ka mid ah Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sabab u ah in ay si gaar ah muhiim ugu noqoto dalalka ugu awoodda badan caalamka oo saldhigyo militeri ka sameystay, si ay u xaqiijiyaan in howshoodu ay kala socoto.
Faransiiska, oo ah dalkii horay u gumeystay Jabuuti, ayaa ilaa hadda militerigiisu ay joogaan waddankan, sidoo kalena waxaa halkaas lagu martigeliyaa saldhigga ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay Qaaradda Afrika.
Shiinaha ayaa isagana Jabuuti ka sameystay saldhiggiisii militeri ee ugu horreeyay ee ku yaalla meel ka baxsan dalkiisa, halka Japan ay ku leedahay saldhiggeedii ugu horreeyay ee ay dibadda ka sameysato wixii ka dambeeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Jabuuti waxa ay dhanka kale marin ganacsi oo muhiim ah u tahay waddanka dariska la ah ee Itoobiya.
Marka la eego dalalka awoodda badan ee ku tiirsan Jabuuti, waxa uu waddankan yar isu baddalay buul ay ku xaroodaan sirdoonka adduunka, sida uu Telegraph ku sheegay maqaalkiisa.
Arrintan oo aan mar dhow billaabanin waxay soo socotay muddo aad u dheer.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa tartan xooggan ugu jira sidii ay awooddooda dhanka sirdoonka ugu xoojin lahaayeen gudaha Jabuuti, mid walbana waxa uu doonayaa inuu ku adkaato ciyaartaas.
Wariyaha diyaariyay maqaalka ayaa marka uu ka warramayay sida ay quwadaha caalamka ugu loollamayaan dalka yar ee ku yaalla geeska Afrika waxa uu ku qeexay “buulka basaasiinta”.
“Horaantii sanadihii 1920-meeyadii booskan waxaa ku jiray magaalada Oslo, afartameeyadii waxay ahayd Casablanca, halka kontomeeyadiina ay ahayd magaalada Berlin,” ayaa lagu yidhi qormada.
“Maanta dad badan waxay dhihi karaan caasimadda basaasiinta adduunka waa waddan aan la aqoonin oo ku yaalla Afrika, oo ah Jabuuti,” ayuu sii raaciyay qoraalkiisa.
Qoraaga oo ay maqaalkiisa sidoo kale soo xigatay warbaahinta sheegay in saldhigga militeriga Mareyknaka ee Jabuuti uu yahay Camp Lemonnier, saldhigga Shiinahana uu ku yaallo meel dhowr meyl u jirta halkaas oo ah cirifka kale ee xeebta.
Guddiga doorashooyinka Galmudug oo shaaciyay guddiga xulista ergada saddex kursi
Madaxweyne Muuse Biixi iyo Wafdi uu Horkacayo oo maanta u socdaalaya dalka Maraykanka